Akwụkwọ kacha mma nke Isabel Allende | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
N'agbanyeghị na a mụrụ ya na Peruvian Lima na August 2, 1942, Isabel Allende bụ onye Chile mgbe niile, kama ọ bụ ada nke Latin America nke hụrụ otu n'ime ndị edemede kacha mma n'ime ya. Onye nnochite anya nke ezigbo anwansi na akwụkwọ edemede na nwanyị, onye edemede nke La casa de los espíritus erewo Akwụkwọ 65 nde gburugburu ụwa. Anyị chịkọtara akwụkwọ kacha mma Isabel Allende dị ka ụzọ kachasị mma iji banye na mbara igwe nke otu bụ otu nnukwu ndị edemede Latin nke narị afọ nke iri abụọ.
1 Oflọ Mmụọ (1982)
2 Nke ịhụnanya na onyinyo (1984)
3 Ọnwa Iv (1987)
5 Nwa nwanyi (1999)
6 Eserese na Sepia (2002)
7 Ihe omimi nke obim (2006)
8 Agwaetiti dị n'okpuru oké osimiri (2009)
9 Ndị Japan hụrụ n'anya (2015)
10 Na-agafe oyi (2017)
Oflọ Mmụọ ...
Iche echiche banyere Allende pụtara ime ya na La casa de los espíritus, akwụkwọ akụkọ mere ka mmadụ niile mara ụwa mgbe ebipụtara ya na 1982. A tụgharịrị ya na a kacha ere ozigbo, ọrụ bụ nnukwu ihe nketa nye kpokọtara n'ezie nke pụtara na 60 yana ihe osise zuru oke nke post-colonial Chile nke otu ezinụlọ, Trueba, hụrụ mbibi nke akara ha n'ihi ịrara mmadụ nye, ọhụụ na esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ihe ịga nke ọma nke akwụkwọ akụkọ ahụ bụ nke na na 1994 ọ wepụtara mmegharị ihe nkiri nke akwụkwọ Jeremy Irons na Meryl Streep.
Nke ịhụnanya na onyinyo (1984)
Nke Lovehụnanya na Onyunyo ...
Mgbe ihe ịga nke ọma nke La casa de los espíritus, Isabel Allende kọọrọ ụwa otu akụkọ echekwara ogologo oge. O mere ya site na Venezuela nakweere na ịbanye n'ime obi ọjọọ nke ndu-uke Chileke, N’oké ọchịchịrị nke a na-akọ akụkọ ya banyere ezinụlọ atọ na mmekọrịta dị n'etiti Irene na Francisco ha bu ukwe nye ugwu na nnwere onwe mmadu. Otu n'ime ya akwụkwọ kacha mma, De amor y de sombra bụ otu n'ime akwụkwọ pụrụ iche kachasị nke Allende na onye ọzọ nke emegharịrị na sinima, oge a na 1994 na Antonio Banderas na Jennifer Connelly dị ka ndị na-akwado.
Ọnwa Iv (1987)
Eva Luna (nke oge a)
Mgbe Allende chọrọ imeghari puku abalị na otu ka ọ dịrị na Latin America jargon, ọ chọpụtara na kọntinent ahụ enwebeghị onye na-akọ akụkọ gọọmentị. N'ụzọ dị otú a, Eva Luna ghọrọ onye ọ bụla Scheherazade na onye protagonist nke akwụkwọ akụkọ na-eso ụzọ mgbapụ nke nwa agbọghọ nke ikike ịkọ akụkọ nwere ịhụnanya maka ụmụ nwoke abụọ metụtara ndị agha okpuru. Akwụkwọ ọgụgụ, ihe ịga nke ọma mgbe e bipụtara ya, dugara n'akwụkwọ akụkọ dị mkpirikpi a na-akpọ Njirimara nke Eva Luna dị ka akwadoro.
Na Disemba 1991, Paula, ada Isabel Allende, A nabatara ya n'ụlọ ọgwụ dị na Madrid ebe ọ dabara na onwe ya, na-emechi ndụ onye edemede ahụ ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-abụ ụbọchị ya na nwa ya nwanyị na-eche, mgbe Isabel ga-amalite ọrụ ya na akwụkwọ ozi nye nwa ya nwanyị nke na-eduga na ahụmịhe na echiche nke onye edemede ahụ n'onwe ya: site na nkuzi nke ọchịchị aka ike nke Chile na nkwadebe nke ọrụ ya Paula, nke nta nke nta, otu ahụ na-ahapụ ụwa niile na-enweghị aha. Akwụkwọ kacha nwee mmekọrịta chiri anya nke Isabel Allende; raw, ezigbo. Apụla.
Nwa nwanyi (1999)
Nịm n'etiti 1843 na 1853, Hija de la fortuna na-eme ka echiche 100% Allende pụta: nwatakịrị nwanyị na-enweghị obi ụtọ n'ịchọ ịhụnanya n'oge oge mgbanwe na esemokwu. N'okwu a, onye a na-eburu n'uche bụ Eliza Sommers, nwa okorobịa Chile nke ndị ezinụlọ Bekee nakweere n'oge ọchịchị Britain nke Valparaíso bụ onye hụrụ Joaquín n'anya, onye hụrụ n'anya hapụrụ California n'oge Gold Rush na 1849. njem Eliza ga - eduga ya ịchọpụta ụwa ọzọ n'aka onye dibịa China site na peeji nke otu n'ime akwụkwọ kacha mma nke Isabel Allende.
Eserese na Sepia (2002)
Eserese na sepia
Ya na ada nwanyi, Isabel Allende bidoro otutu akwukwo edebere n’oge California Gold Rush nke Portrait di na Sepia bukwa otu. Akụkọ a, nke Aurora del Valle, nwa nwa Eliza Sommers kọrọ na onye mbụ, kpuchiri ndụ ya n'okpuru nchebe nke nne nne ya, Paulina del Valle, mmepe ya dị ka onye na-ese foto ma ọ bụ mmekọrịta oke ifufe ya na Diego Domínguez. Na obodo San Francisco dị ka ihe ndabere, Eserese na Sepia na-akụ nzọ ọkaibe na nwanyị, site n'ibelata akụkọ ịhụnanya na otu n'ime akụkụ atọ nke mejupụtara akwụkwọ ahụ.
Ihe omimi nke obim (2006)
Ihe akaebe ahụ enyere nwa ya nwanyị bụ Isabel nyere anyị niile aka ịmara akụkọ banyere mbụ nwanyị, byaru anụ Chileke: Inés, nwa agbọghọ si Extremadura nke na-achọ ịchọ di ya furu efu n'amaghị na ọ ga-akwụsị idebanye aha na otu n'ime akụkọ akụkọ ihe mere eme kachasị mkpa na mpaghara South America. Site n'ọdịda nke alaeze Inca na Cuzco ruo na ntọala Santiago de Chile, Inés del alma mía, karịa akụkọ banyere otu nwanyị, bụ ihe osise nke kọntinent e nwere n'ike.
Agwaetiti dị n'okpuru oké osimiri
Mgbe Allende gwusịrị na akụkụ dị iche iche nke kọntinent ya, o mikpuru onwe ya na Haiti nwere ohu nke narị afọ nke XNUMX. Mpaghara nke emume voodoo, ọgbaghara, na Mgbanwe mgbanwe izizi megide ịgba ohu na 1791. Oge mgbanwe nke ohu, Zarité bi, bụ onye mgbe o yiri ka ọ ga-enye ụmụaka mulatto n'aka nna ukwu rụrụ arụ na-amata ihe dị n'ofe ala nke na-egbochi ndị na-eche na ọ dị mgbe mkpọtụ ahụ, ndị nke agwaetiti ahụ n'okpuru oké osimiri tere aka na Caribbean. Ukwuu na-atụ aro.
Ndị Japan hụrụ n'anya (2015)
Otu n'ime akwụkwọ akụkọ ikpeazụ nke Isabel Allende bụkwa otu n'ime otuto toro eto mgbe ọ na-ekwu okwu isiokwu nke ihunanya, kpochapụwo nke onye edemede, site na ntụgharị dị iche. Edere n'oge Agha Worldwa nke Abụọ, Onye Japan hụrụ n'anya na-akọ banyere mmekọrịta dị n'etiti Alma Velasco na Ichimei, onye ọrụ ubi Japan, site na mba dị iche iche na ọkara nke abụọ nke narị afọ XNUMX. Otu akụkọ na-agbawa obi tụụrụ dị ka akụkọ ifo maka ndị okenye na-egosi enweghị ezi ịhụnanya ma bụrụkwa ebe ọtụtụ ndị ọzọ nọ (ma ọ bụchaghị nke ihunanya).
Na-agafe oyi (2017)
Na-agafe oyi ...
«N’etiti oyi ka m mechara mụta na e nwere okpomọkụ a na-apụghị imeri emeri n’ime m»
Site na nkwuputa a nke Albert Camus mụrụ ọrụ ikpeazụ nke Allende. Akwụkwọ ọgụgụ, ikekwe otu n’ime ndị lekwasịrị anya n’ebe ndị Latino bi n’Amerịka, na-enye ihe odide atọ n’oge otu ajọ ifufe dị na kọntinent ahụ: onye Chile, onye Guatemalan na nwoke America nke na-agabiga oge kachasị njọ nke ndụ ha. Akụkọ atọ na-agwakọta na-enweghị ndị na-akwado ha nwere ike ịkọwa mbata nke oge ọkọchị na-atụghị anya ya.
Kedu maka gị akwụkwọ ndị kachasị mma Isabel Allende, nụkwa?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ kacha mma nke Isabel Allende
Oflọ nke mmụọ, bụ (mgbe otu narị afọ nke ịnọ naanị nke Great Gabo -QEPD-) ọmarịcha ọrụ m gụrụla na ndụ m nke akwụkwọ ọzọ magburu onwe ya sochiri: Of Love and Shadows.
Zaghachi Katina Mónaca
obodo nke anumanu site kwa na ezigbo onye edemede a bu ezigbo akwukwo nke na-ahapu otutu ihe omumu nye onye na-agu ya, echere m na odi nkpa ikwuputa ya.
Ajụjụ ọnụ nke Gabriel Martínez, onye edemede nke El Asesino de la Vía Láctea.